Search by Author Name: -- Search by Author -- Goldie Kyaw Laura Cho (Career Coach) ကိုထှနျး(ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ) ကြော့ကခေိုငျ ခငျမောငျညို (ဘောဂဗဒေ) ခငျမောငျညို (ဘောဂဗဒေ) ဇငျဖွိုးပိုငျ (MESI) ဇာနညျ (My Way!) ညီထှဋျ တိုးတကျမေ ထကျကြျော ထိနျလငျးကြျော (HR) ဒေါကျတာထှနျးဝငျး ဒေါကျတာအောငျထှနျးသကျ ဒျေါစနျးစနျး B.Sc (Geology), DIL. DL ဒျေါမျော (HR) နနျးကူးကူးလှိုငျ M.A (English, YUFL) နသေဈ (MDY) မင်းခန့် မင်းခေါင် (Amara) မငျးနိုငျ (ရှဘေို) မငျးအောငျမငျး မောငျမောငျမွငျ့သိနျး (စကျမှုတက်ကသိုလျ) ရာသကျပနျ (သစ်စာပှငျ့ပနျးလနျးရာမွေ) လငျးသိုကျညှနျ့ (မွနျမာ့မွေ) လှဘုနျးအောငျ(HR Practitioner) သူရထိုကျ အဂ်ဂ အလယ်လူ အုနျးဝမျ အောငျဖွိုးလတျ(Right & Justice) အောငျသဈ အေးမွတျမွတျသူ (သူ့ထကျကဲ) ဥက္ကာမြင့် ဦးလှမွငျ့ (မားကကျတငျး) ဦးအောငျသနျး စောကယ်ရီဝင်း (KC Myanmar) မောင်မြင့်မိုရ် (OMEGA Counsltancy) အောင်ခိုင် (မီးအိမ်ရှင်)
အလုပ်ထွက်နှုန်းများရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သဘောသဘာဝနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Michael Armstrong (Human Resource Management – Strategy and Action, Kogan Page, 1995, p.150) မှာဖော်ပြထားတာကတော့အောက်ဖော်ပြပါဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်တွေမှာစိတ်နှစ်မြှုပ်နိုင်မှုပျောက်ဆုံးခြင်း၊စိတ်ကျေနပ်မှုပပျောက်ခြင်းတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆီလျော်တဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတွေမရှိတော့တဲ့အခါအလှုပ်ထွက်နှုန်းမြင့်မားလာတတ်ပါတယ်။အလုပ်ခွင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်မှီဖို့အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတွေကလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်ကနှုတ်ထွက်တတ်ကြပါတယ်။အလုပ်ဝင်စဝန်ထမ်းအသစ်တွေမှာလည်းလုံလောက်တဲ့သင်ကြားပြသပေးမှုတွေမရတဲ့အခါမှာ induction crisis လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အသစ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတွေကိုအသားမကျနိုင်မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဖိစီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကာလက်မြှောက်အရှုံးပေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
Marcus Buckingham ( First, Break all the Rules, Warner Business Books, 2001) အရဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ထွက်တာကအဖွဲ့အစည်းကိုမနှစ်မြို့လို့ဆိုတာထက်မိမိရဲ့အထက်အရာရှိနဲ့အဆင်မပြေလို့ဆိုရင်ပိုမှန်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ထွက်တယ်ဆိုတာကယေဘုယျပြောရရင်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကိုမနှစ်မြို့တာ၊အတွင်းကျကျဆိုရရင်တော့မိမိကိုတိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်နေသူနဲ့အထက်အရာရှိတွေကမျှမျှတတမဆက်ဆံတာ၊ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တာ၊ပံ့ပိုးမှုတွေမရှိတာ၊လမ်းညွှန်မှုမပေးတာ၊အသိအမှတ်ပြုမှုတွေအားပေးဖေးမမှုတွေမရှိတာတွေကိုသိမြင်ခံစားလာရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဝန်ထမ်းတွေဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူဆက်ဆံခံရဖို့ထိုက်တန်သလိုအထက်ဖော်ပြပါပံ့ပိုးမှုတွေကသူတို့ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကတော့ဘက်မလိုက်ဖို့နဲ့တစ်ဦးတစ်ဖွဲ့အပေါ်အပြစ်ဖို့ခြင်း (ဝါ) တရားခံရှာခြင်းမလုပ်မိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖြေမှာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေ (အကြီးတန်းအရာရှိများ) ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်စီမံတဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တွန်းအားပေးတိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။မိမိရဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လက်မခံနိုင်သူတွေကိုတော့အရေးကြီးတဲ့ရာထူးနေရာတွေကနေရွှေ့ပြောင်းပေးသင့်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ရန်သင်တန်းများပေးဖို့လည်းမမေ့သင့်ပါဘူး။သင်တန်းပြီးဆုံးရင်လည်းလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိမရှိသဘောထားတွေပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကိုပါကြီးကြပ်သင့်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအစီအစဉ်တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့နေရာဌာနပေါင်းစုံမှာပါပြောင်းလဲတာဝန်ယူနိုင်မယ့်ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးတွေတိုးတက်ဖို့၊ Emotional Intelligence တိုးတက်ဖို့အတွက်ပါအလေးထားသင့်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြင်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်အနာဂါတ်မှာပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပါအလိုက်သင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Reference: Specimen Answers and Introductory Comments prepared by Dr. Ted Johns (Chief Examiner, ABE UK) February 2004